क्या खास्सा लोकतान्त्रिक दशैं
अहा, क्या खास्सा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक दशैं । यस्तो पो दशैं । पञ्चायती शैलीमा मनाइएको यो दशैं लोकतान्त्रिक इतिहासमा अंकित भयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरुले धीत फुकाएर आफन्तजन र आउनेहरुलाई टीका लगाइदिए, दानदक्षिणा र मुख मीठो पारेर खुशी बाँडे ।
कसले भन्छ, धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हिन्दुत्व छैन । हिन्दुत्वमात्र होइन, पञ्चायत पनि ज्यूँदैछ । सर्वहाराका नेता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासहितको यो दशैं परम्परा, राजकीय शैली, निरंकूशताका गन्धहरुले हाम्रा शासकहरु कुन प्रकारको शासन पद्धतितिर उन्मुख भइरहेका छन्, यही एउटा तस्वीरले प्रष्ट पारेको छ ।
क्या खास्सा लोकतन्त्र । लोकतन्त्र कसैलाई आयो भने नेकपालाई आयो । नेपाली कांग्रेसलाई पनि आएको छ । बाँकी अरु पार्टी, आमनागरिक र देशमा लोकतन्त्र आओस् कि नआओस् । लोकतन्त्र भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पद्धति हो भन्ने नेकपाले प्रमाणित गरिदिएको छ । अव पनि जनता झुक्किने ? अव पनि जनता भ्रममा बस्ने ? अव पनि जनताले सहिरहने ?
भनिन्छ, जनता जस्ता छन्, जुन स्तरका छन्, जनताले त्यस्तै र त्यही स्तरका शासक पाउनेछन् । जनता नै सोझा र सहनशील भएपनि निरंकुश शासकहरुले जनतालाई यसैगरी इख्खाइ इख्याई यसैगरी तमासा देखाइरहने छन् र मुखले सर्वहारा, सिमान्तकृत सबैका लागि समानताको व्यवस्था, प्रगति ल्याउँछु भनिरहनेछन् । पहिले पहिले दरवारमा देखिन्थ्यो यस्तो दृश्य । आजकल बालुवाटार र शीतल निवासमा त्यही परिदृश्यहरु दोहोरिन थालेका छन् । राजा किनारा लगाएर यी नयाँ राजारानीहरुको उदय भएको छ । यिनले आफूलाई जनताका शासक भनेका छन्, वास्तवमा यिनको कार्यशैली र व्यवहारले यिनीहरु जनतामाथिका शोषक बनेका छन् र जनता यिनका जुका चरित्रलाई मजाले रगत चुसाइरहेका छन् ।
यति हुँदा पनि आमनागरिक यिनलाई नेता मान्छन्, यिनीहरुमाथि भरोसा गर्छन् र टुटेका विश्वासलाई जोडजाड पारेर अझै यिनीहरु जनताका लागि काम गर्छन् कि भनेर आशा राखिरहेका छन् । जनताको सबर कहिले टुट्छ, टुटेपछि सुनामी आउँछ कि भूकम्प भन्न सकिन्न । नेपाली जनता लिस्नो नहुन्जेल सहन्छन्, जब जुर्मुराउँछन् अनि जनतालाई सम्हाल्न सकिने अवस्था रहदैन । नेपाली जनताको चरित्र २०३६, ४६ र ६३ सालमा देखिइसकियो । अव पनि नचेत्ने ? पछि पछुताउनुभन्दा अहिले नै चरित्र सुधारौं । निष्ठाको विकास गरौं ।